လက်ကားအဖြူရောင် Testosterone Steroids Testosterone Isocaproate တိုးမြှင့်ခွန်အားနှင့်ကြွက်သားရရှိခြင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ |Taigui
White Testosterone Steroids Testosterone Isocaproate ခွန်အားတိုးစေပြီး ကြွက်သားများရရှိစေခြင်း၊
ထုတ်ကုန်အမည်- Testosterone Isocaproate
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဖြူရောင် crystalloid အမှုန့်
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ- စတီရွိုက်များ၊ စတီရွိုက်နှင့် ဟော်မုန်း၊ API၊ တက်စတိုစတီရုန်း
အသုံးပြုမှု : အမျိုးသားဟော်မုန်း နှင့် anabolic ဟော်မုန်းများ။
သိုလှောင်မှု- အခန်းအပူချိန် 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက် တွင် သိမ်းဆည်းရန် အကြံပြုထားသည်။
ဆေးကို နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်၊ အပူနှင့် အစိုဓာတ်နှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးကို ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမှီရာနေရာများတွင် မထားသင့်ပါ။
Testosterone Isocaproate ချက်ပြုတ်နည်းများ
100ml@200mg/ml Testosterone Isocaproate ဖြေရှင်းချက်
အမှုန့် 20 ဂရမ်
Guaiacol ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။၎င်းသည် PIP ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့် BB နဲ့ guaiacol ရာခိုင်နှုန်းကို ခွဲရမယ်။
ထို့အပြင် BA ကို 2.5 ml သို့လျှော့ချပါ။
ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် Steroids ပေါင်းစပ်မှုများ
►၁။6mg Testosterone Propionate + 12mg Testosterone Phenylpropionate + 12mg Testosterone Isocaproate + 20mg Testosterone Decanoate
►၂။Testosterone Decanoate 100mg + Testosterone Propionate 30mg + Testosterone Phenylpropionate 60mg + Testosterone Isocaproate 60mg
►၃။30mg testosterone propionate + 60mg testosterone phenylpropionate + 60mg testosterone isocaproate + 100mg testosterone caproate
Testosterone Isocaproate လုပ်ဆောင်ချက်များ
1. Testosterone Isocaproate ကို hypogonadism နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဲ့သို့သော testosterone ချို့ယွင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
2. Testosterone Isocaproate သည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုးလာစေပြီး ခွန်အားကိုရရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီများကို ဆုံးရှုံးရာတွင်လည်း ကူညီပေးပြီး libido၊ သွေးနီဥဆဲလ်များ တိုးပွားလာကာ ကိုယ်ခံအားနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် အမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
3. အစောပိုင်းတွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ၎င်း၏အသန့်စင်ဆုံးပုံစံဖြင့် စျေးကွက်တွင်ရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း ၎င်း၏ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပုံစံကို Testosterone Cypionate နှင့် Testosterone Enanthate ပုံစံဖြင့် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Testosterone Isocaproate ဆေးပမာဏ
Testosterone Isocaproate ကို ထိုးဆေးပုံစံနဲ့ သောက်နိုင်ပါတယ်။
အစပြုသူများအတွက် 250 mg/week ကို အကြံပြုထားပြီး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် သောက်နိုင်ပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူများအတွက်လည်း တစ်ပတ်လျှင် 1000 mg အထိ တိုးနိုင်သည်။
Testosterone Isocaproate အသုံးပြုမှု
Adrenal cortex ဟော်မုန်း၊ ရောင်ရမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ဓာတ်မတည့်မှု ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဆေးဝါးပစ္စည်း၊ Steroid ဟော်မုန်း၊ Anabolin။အမျိုးသားဟော်မုန်းနှင့် anabolic ဟော်မုန်းအဖြစ်။
Testosterone ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့် Isocaproate ester သည် Testosterone Cypionate နှင့် Testosterone Enathate အကြား9ရက်အတွင်း သက်တမ်းတစ်ဝက်ရှိသည်။
Testosterone Isocaproate ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လျှောက်လွှာ
Mass Strength Testosterone Isocaproate သည် anabolic steroid ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ကြွက်သားများ၏ ပရိုတင်းပေါင်းစပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အစွမ်းထက်သော စွမ်းရည်ရှိပြီး၊ ကာယဗလသမားနှင့် အားကစားသမား အများအပြားသည် ဤထုတ်ကုန်ကို ထုထည် သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်သည့် စက်ဝန်းတွင် ထည့်သွင်းသည်။
ခွန်အားရရှိခြင်း။ Testosterone Isocaproate သည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုးလာစေပြီး ကူညီပေးသည်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီများကို ဆုံးရှုံးရာတွင်လည်း ကူညီပေးပြီး libido၊ သွေးနီဥဆဲလ်များ တိုးပွားလာကာ ကိုယ်ခံအားနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် အမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
ခံနိုင်ရည် တိုးစေခြင်း။ ဤထုတ်ကုန်ကို သောက်သုံးပြီးနောက် သွေးနီဥများ တိုးပွားလာကာ သင့်သွေးတွင် အောက်ဆီဂျင်ပိုမိုသယ်ဆောင်လာကာ ယခင်ကထက် ခံနိုင်ရည်အား ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း။ ဒီနေရာမှာ နားလည်မှုလွဲနေတာက စတီးရွိုက်ဆေးသောက်ပြီး သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်လို့ ထင်နေကြတာ မှားပါတယ်၊ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ပရိုတင်းပေါင်းစပ်မှု Testosterone Isocaproate သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပရိုတင်းများ ပေါင်းစပ်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကော်တီဆော လျှော့ချခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လေးလံသော လေ့ကျင့်မှုများပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ခွန်အားကို တိုးမြင့်စေပြီး လူကို ထုထည်ပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးရာတွင် အသုံးဝင်သည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် bulking cycles နှစ်ခုလုံးတွင်လည်း အလွန်ထိရောက်ပါသည်။သို့သော် ၎င်းသည် အန်ဒရိုဂျင် အမျိုးအနွယ်နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့် ၎င်းသည် အနံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိသော ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိသည်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင် တခြား Testosterone နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေ ပါရှိပါတယ်။
ယခင်- ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း Testosterone Enanthate CAS 315-37-7 Testosterone steroid
နောက်တစ်ခု: ထိုးဆေး ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း Testosterone Phenylpropionate TPP Steroid Powder CAS 1255-49-8
50mls Tren acetate / တရားဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစတီရွိုက် Reci...
ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု Steroids Mibolerone ထိုးဆေး...